Ejipta: Kintana iray no mamiratra ao an-kianjan'i Tahrir
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Febroary 2011
Kianja Tahrir, ivon'ny hetsika goavana ao afovoan'i Kairo mangataka ny fialan'ny fitondran'i Mubarak, nahita ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana betsaka indrindra androany ahtramin'ny nanombohan'ny fihetsiketsehan'ireo mpandàla ny demaokrasia 15 andro lasa izao..
Ejipta: Nametra-Pialàna Tsy ho Mpitarika ny NDP eo amin'ny fitondràna ve i Mubarak?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Febroary 2011
Vaovao vao nilatsaka ny hoe nametra-pialana amin'ny maha filohan'ny antoko NDP mitondra amin'izao fotoana azy ny filoha Ejiptian Hosni Mubarak. Andro faha-12 amin'ny hetsi-bahoaka goavana manerana an'i Ejipta itakiana ny fialàny no nisian'izany. Fanavaozam-baovao: niova ny vaovao ankehitriny: mety tsy niala tamin'ny toerany i Mubarak. Indreto fanehoan-kevitra avy ao amin'ny...